အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Life Style ကို အကုန်လုံးချိန်းထားတယ် - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှာ အနုပညာလှုပ် ရှားမှုတွေ သိပ်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ စံရတီ မိုးမြင့်နဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် သူမရဲ့ အချစ် ရေးနဲ Weight ချဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို မေးမြန်း ထားပါတယ်။
Q. ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်က ကိုယ့် အတွက် ဘယ်လိုနှစ်မျိုးလဲ။
A. ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်က ပျော်စရာ လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ တစ်နှစ်လုံး ပျော်စရာတွေနဲ့ပဲ ပြည့် နှက်နေတဲ့နှစ်လည်း မဟုတ်သလို၊ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေတဲ့ နှစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ ရင့်ကျက်လာတယ်။
Q. ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် Plan ကရော…။
A. ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် Plan ဆိုပြီး ချထားတာတော့မရှိပါဘူး။ အဖြစ်ချင်ဆုံးကတော့ အခုချိန်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပျော်အောင်ပဲ နေချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့် Life Style ကို အကုန်လုံးချိန်းထား တယ်။
Q. Body Weight ကိုရော ဘယ်လိုလျှော့ခဲ့လဲ။
A. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတော့ မရှိပါဘူး။ အစားလျှော့စားတယ်။ တစ်ခါတလေမှ Gym သွားဆော့ ဖြစ်တယ်။ အဓိကကတော့ အစားနဲ့ လျှော့တာပါ။ အစားလျှော့တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးလျှော့တာတော့ ကွာတာပေါ့။ အသားကျစ်တာတို့ မကျစ်တာတို့တော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အမြန်ကျချင်တော့ အစားနဲ့လျှော့တယ်။ ညပိုင်းဆို အစားမစားဘူး။ အရင်တုန်းကဆို ရင် အရမ်းစားတာလေ။ အခုတော့ နည်းနည်းလျှော့စားတယ်။ ပြီးတော့ လူကြီးဖြစ်သွားတော့ နည်းနည်း ကိုယ်ရေစစ်သွားတာလည်း ပါမှာ ပေါ့။
Q. ကိုယ့်ရဲ့ Life Style ကို ချိန်း ထားတယ်ဆိုတော့ အရင်ကထက် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ။
A. ပိုပြီး ရင့်ကျက်ပြီးတော့ တည်ငြိမ်လာမှာပါ။ အရင်တုန်းက ဆိုရင် အရမ်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော တတ်တယ်။ ဘာမှလည်း လျှို့ဝှက် မထားတတ်ဘူး။ အချစ်ရေးနဲ့ပတ် သက်လာရင်လည်း ဘာခံစားနေရ တယ်ဆိုတာ တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် အင်တာဗျူးဖြေရင်တောင် ကိုယ့်ခံ စားချက်က မတူဘူး။ အခုတော့ အဲဒီလိုမျိုးမရှိတော့ဘူး။ အေးအေး ချမ်းချမ်းပဲ နေချင်တယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မဟုတ်ဘူး။ Life Style တစ်ခုလုံးကို ချိန်းပစ်လိုက် တာဆိုတော့ ဘဝတစ်ခုလုံးက အခု ချိန်မှာ အရမ်းအေးချမ်းတယ်။
Q. ချစ်သူရော ရှိနေပြီလား။
A. ကိုယ်ရွေးလိုက်ရင်တော့ ရှိ မှာပေါ့။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ပတ်လည် မှာရှိနေတာပဲ။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက် ရင်တော့ ရှိမှာပေါ့။ မရှိဘူးလို့တော့ မညာချင်ပါဘူး။
Q. ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ထဲက ဘာတွေသင်ခန်းစာရခဲ့လဲ။
A. ဘာတွေသင်ခန်းစာရလဲဆို တော့ အရင်တုန်းကလိုမျိုး ကိုယ့် အလုပ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိအောင် တကယ်လို့ချစ်သူ လောလောဆယ် တော့မရှိသေးဘူး။ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် လည်း သေချာတဲ့အချိန်တစ်ခု ရောက်မှ ဖွင့်ပြောတော့မယ်လို့ စဉ်း စားထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ အရင်က ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ Lesson တွေထဲကနေ Learn လုပ်တာ ပေါ့။
Q. ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ အဆက်မပြတ်ပြန်လုပ်သွားတော့မှာ လား။
A. ၂ဝ၁၇ နှစ်ဝက်လောက်က စပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နည်း သွားတယ်။ အဓိက ကျန်းမာရေး ကြောင့်ရော Weight ချချင်တာ ကြောင့်ပါ အဲဒါမျိုးလေးတွေကြောင့် ပါ။ အခု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ အနု ပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်မြင်ရမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလည်း ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုတွေ၊ ကြော်ငြာတွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။